Quick Answer: How much is the intercape from Cape Town to Zimbabwe? - And all this is Africa
Quick Answer: How much is the intercape from Cape Town to Zimbabwe?
How much is Chihwa bus from Cape Town to Zimbabwe?
How much is a bus to Zimbabwe?
Which buses are going to Zimbabwe from Cape Town?
How much is bus from Zimbabwe to Cape Town?
How much is a bus from Johannesburg to Zimbabwe?
A small survey by GroundUp at the Cape Town bus terminus on 5 December confirmed that the two main direct bus lines to Zimbabwe, Chihwa and Munhenzva, are charging R1,600 one way. During the year, Chihwa charges R800 and Munhenzva R900.
Bus or fly from South Africa to Zimbabwe? The best way to get from South Africa to Zimbabwe is to fly which takes 3h 54m and costs R 4 100 – R 10 000. Alternatively, you can bus, which costs R 450 – R 800 and takes 20h.
We compare all available buses departing from Cape Town and arriving in Harare and show you the exact stops, all travel times, and of course the best ticket prices.
Facts about the bus from Cape Town to Harare.
Bus Companies Intercape, Busbud, Delta Coaches, Munenzwa, Computicket, Chihwa Tours
Earliest and Latest Bus Departures 8:00AM – 7:30PM
Minimum Price $70
IT\_'S FUNNING: Is Friday 31st a holiday in Kenya?
Zimbabwe tourist visa is not required for citizens of South Africa for a stay up to 90 days. Good news if tourist visa is the correct choice for the purpose of your trip to Zimbabwe.
The cheapest way to get from Johannesburg to Zimbabwe is to bus which costs R 450 – R 800 and takes 20h.